ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျောက်ကြီး-KNU ရုံးသို.သွားရောက်ခဲ့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျောက်ကြီး-KNU ရုံးသို.သွားရောက်ခဲ့
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ် ဥက္ကဌ ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင် .တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် ၂၀.၁.၁၃ည နေ (၅း၃၀)တွင်ကျောက်ကြီး မြိုနယ်တွင် ဖွင်လှစ်ထားသော KNU ဆက်ဆံရေးရုံးသိုသွားရောက်ပြီး KNU တပ်မဟာ (၃) တပ်မဟာမှုး စောအယ်ကလူသိန်းဦးဆောင်သောအဖွဲနှင် . ငြိမ်းချမ်းရေးဖေါ်ဆောင်မှု. လုပ်ငန်း၊ဒေသဖွံဖြိုးမှု.မြှင်တင်ဆောင်ရွှက်ရေး။ မြေမြှတ်မိုင်းများရှင်းလင်းရေး မိုင်းသင်.စစ်ဘေးဒဏ်ခံမသန်စွမ်းသူများ ဘ၀ တိုးတက်ရေး အတွက်ဥက္ကဌမှ ပံပိုးဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ၊KNU မှအဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်နှင် .လုပ်ငန်းနယ်ပါယ်အသီးသီးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် သဘောတူကြောင်း တပ်မဟာမှုးကပြောကြားခဲပါတယ်။